Ny orinasam-pitaterana an'habakabaka UK dia manafoana ny sidina Espana rehetra taorian'ny nanambarana ny vonjy taitra
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny orinasam-pitaterana an'habakabaka UK dia manafoana ny sidina Espana rehetra taorian'ny nanambarana ny vonjy taitra
Farafahakeliny fiaramanidina Jet2 voafatotra Espaniola dimy no voatery nanodina ny sidina ary niverina tany UK ny sabotsy. Fotoana fohy taorian'io dia nanambara ny mpitatitra vola Britanika fa nanafoana ny sidina rehetra Coronavirus-Ny tanibe nosy Espaniola, ny nosy Balearic ary ny nosy Canary.
Jet2 hoy izy "mifandray amin'ireo mpanjifantsika, " izay nanantena ny hiverina hody "hanoro hevitra azy ireo ny safidiny. " TUI dia nanapa-kevitra toy izany koa, manafoana ny sidina rehetra mankany Espana ny faran'ny herinandro.
Ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka roa ireo dia nanonona ny fepetra nambaran'ny governemanta Espaniola tamin'ny zoma mba hamehezana ny fihanaky ny aretina.
Ny praiminisitra espaniola Pedro Sanchez dia nanambara ny hamehana ao amin'ny firenena mandritra ny 15 andro manomboka ny asabotsy, manome ny fahefana amin'ny governemanta hametraka fameperana bebe kokoa amin'ny fivezivezena sy ny fivorian'ny besinimaro eo ambonin'ireo efa navoakan'ny governemanta eo an-toerana sy any amin'ny faritra.